I-China Z-LION 5 ingxenye yomcibisholo engu-3inch yedayimane yokugaya abakhiqizi nabaphakeli |Idayimane ye-ZL
Inombolo yamasegimenti: 5
Uxhumano:I-Velcro noma insimbi emuva enezimbobo eziningi
Usayizi odumile ungu-3”( ungaba ngu-76mm, 80mm noma 83mm ububanzi).
5 Amasegimenti omcibisholo aqondaniswe ngendlela yewashi noma ephambene newashi.Amasegimenti omcibisholo ane-perimeter emikhulu ukuze asike kakhudlwana kukhonkolo.
Le puck yengxenye yemicibisholo emi-5 isetshenziswa kabanzi ukuvula nokugaya indawo kakhonkolo ekuqaleni kwenqubo yokupholisha phansi kukakhonkolo.Idizayini yengxenye yomcibisholo emise okwegeja iphinde isebenze kahle ekususeni ukunamathela.
Isibopho sale puck yokugaya iyatholakala kusukela ekuthambile kakhulu kuye kokuqina kakhulu.Isibopho esimaphakathi siyanconywa ezimweni eziningi;isibopho esithambile sokhonkolo oqinile;isibopho esiqinile sokhonkolo othambile.Okuthambile okwengeziwe, okuthambile kakhulu, ukuqina okungeziwe kanye nokuqina okukhulu kungenziwa ngokwesicelo ngasinye.
Amagridi atholakalayo ale puck yokugaya angu-6#, 16#, 30#, 50#, 70#, 100#, 120#, 200# kanye nama-400#.
Ngemuva kwale puck yokugaya kungaba i-velcro noma insimbi enezimbobo eziningi nezikhonkwane ukuze ilingane nemishini yokugaya ebanzi efana ne-HTC, STI, Onfloor, Diamatic, SASE njll.
I-velcro enekhodi enombala nopende ukuze ubonakale kalula.Umbala ungafakwa ikhodi njengenombolo yegrit ngayinye noma ngobulukhuni bebhondi ngayinye.
Ingxenye yomcibisholo we-Z-LION 5idayimane ukugaya puckezokuvulwa kanye nokugaya kokuqala kokhonkolo ohlelweni lokupholisha phansi kukakhonkolo.Izici ezikhethekile zaleli thuluzi lokugaya zimi kanje:
Amadayimane ezinga lezimboni, amasegimenti omcibisholo anomkhawulo ophambili kanye nedizayini yegeja akhulisa ikhono lokusika lale puck yokugaya.
Ukugxiliswa kwedayimane okunengqondo ngisho nokusatshalaliswa kwedayimane kanye nokushisela okuchwepheshile kwengeza ukuphila isikhathi eside kule puck yokugaya.
Ngezimbobo eziningi nezikhonkwane zokucushwa ngemuva, i-puck yokugaya ingafakwa ezinhlobonhlobo eziningi zokugaya phansi ngaphandle kwe-adaptha.
Izinhlobonhlobo eziningi zamabhondi nama-grits ayatholakala.Inombolo yeamasegimenti okugaya idayimaneingalungiswa ngokuvumelana nesicelo samakhasimende.Umbala we-velcro nopende ungenziwa ngokwezifiso.I-OEM/ODM yamukelekile.
Imodeli No. I-ZL-16C5A
Ingxenye Umumo womcibisholo
Inombolo yamasegimenti 5
Ibhondi Ithambile kakhulu, ithambile kakhulu, ithambile, imaphakathi, iqinile, ilukhuni kakhulu futhi ilukhuni kakhulu
Ama-Grits 6#,16#,30#, 50#, 70#, 100#, 120#, 200#, 400#
Ukuxhumana I-Velcro noma insimbi emuva enezimbobo eziningi
Isetshenziselwa kakhulu ukulungiswa kwendawo yaphansi nokubuyisela.Ilungele ukuvulwa nokugaya kokuqala kokhonkolo kunqubo yokupholisha phansi kukakhonkolo.Ingasetshenziselwa ukususa i-coating encane futhi.
Okwedlule: I-Z-LION Iphedi lokupholisha likakhonkolo elinelungelo lobunikazi bokusetshenziswa okumanzi nokomile
Olandelayo: Ithuluzi lokugaya ukhonkolo le-PCD lemishini yokugaya phansi ye-Lavina